Ra’iisul wasaaraha UK: kama cabsanayno Maraykanka, qaladkiisuna waan sheegaynaa | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Ra’iisul wasaaraha UK: kama cabsanayno Maraykanka, qaladkiisuna waan sheegaynaa
Ra’iisul wasaaraha UK: kama cabsanayno Maraykanka, qaladkiisuna waan sheegaynaa
Xiisad siyaasadeed oo la moodo inay qalqal galin galin doonto xiriirka UK, iyo Maraykanka ayaa soo if-baxday.
Madaxwaynaha dalka Maraykanka Donald trump oo ah qof barta Twitter-ka ku leh taageerayaal gaaraya 48 Milyan oo qof ayaa dhowaan bartiisa Twitter-ka retweet-gareeyay qoraal Twitter ka ay soo dhigeen dadka midigta fog ee reer Britain.
Ra’iisul wasaaraha Ingiriiska haweenayda lagu magacaabo Teresa may ayaa trump u sheegtay inuu arintaasi ku qaldan yahay.
Ayadoo is dhaafsiga hadalladaasi markii hore walaac lagu muujinayay ayaa warka waxaa sii xumeeyay oo sheekada Bansiin kusii daray isagoo bartiisa Twitter-ka ku weeraray May,.
Trump ayaa waxaa uu ku yiri qoraalkiisa ” Aniga Diiradda ha i saarin ee waxaad diiradda saartaa burburka Asal raacayaasha islaamiga ah ay ka gaysanayaan Gudaha UK. Aniga hadda waan fiicanahay”.
Teresa may, ra’iisul wasaaraha UK, oo ku Sugan magaalada Camaan ee dalka Jordan ama Urdun, ayaa ayadoo warbaahinta kula hadlaysay maanta oo Khamiis ah ayaa ayaduna waxaa ay sheegtay markale in Madaxwaynaha Maraykanka uu Ku qaldanaa inuu taageero u muujiyo kooxaha islaamka nacayb ee Middigta fog ee dalka UK.
” Waxaan rabaa inaan caddeeyo haddii aan xiriir fiican la leenahay Maraykanka inaysan micnaheedu ahayn inaan Maraykanka ka cabsanayno inaan u sheegno qaladkiisa” ra’iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa ayaduna sidaa sheegtay.
Xisbiga tallada haya iyo kan mucaaradka UK, ayaa u midoobay Mr. Trump.
Sheekadu waxaa ay maraysaa her mas’uuliyiin xisbiyada ka tirsan ay ka hadlaan haddii Donald trump maxkamad uu wajihi karo haddii uu dalkaasi booqdo.
Duqa magaalada London, Sadiiq Khan, oo ah nin Muslim ah oo ka soo jeeda dalka Pakistan ayaa sidoo kale sheegay in Madaxwaynaha Maraykanka aanu ahayn nin xishooda maxaa yeelay buu yiri dadka isaga taageersan waa kuwo asal raacayaal ah.
Mr. Khan, ayaa bartiisa Twitter-ka waxaa uu soo dhigay qoraal kooban oo uu kaga jawaabayay hadalka Madaxwaynaha aan afkiisa la xishoon ee dalka Maraykanka Donald trump.
Waxaa uu sheegay in booqashadiisa London ee la rajaynayo bilowga sanadka soo aadan inaanu la kulmi doonin soo dhowayn wanaagsan.
Siyaasiyiinta qaar ayaa soo jeediyay in Donald trump aanu ahayn America islamarkaana loo baahan yahay in la inkiro.
Safiirka Uk, u fadhiya Maraykanka Kim Darroch, ayaa sheegay in hadalada kasoo baxaya Trump ay la wadeegeen Aqalka Cad.
Xoghayaha Arrimaha Dibadda UK, Boris Johnson, ayaa sidoo sheegay in Trump uu taageero u muujinayo dadka kasoo horjeeda wada noolaashaha islamarkaana Islaamka nacayb.
Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa ah dalal xiriir taariikhi ah uu ka dhaxeeyo, ayagoo sidoo Kale wadaga dhaqan, Af iyo Diin.
Previous articleYemen: Xuuthiyiinta iyo Ciidamada daacadda u ah Cali Cabdalla Saalax oo mar kale dagaalamay
Next articleMarkii ugu horaysay taariikhda Soomaaliya Ciidanka XD oo Mushaarkooda u heli doona qaab Electronic ah (Sawiro